Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Ị nwere ibu nke nhọrọ mgbe ị na-ekpebi otú njem. Dị ka aha nke ama nkiri, ị nwere ike ịga via ụgbọ elu, ụgbọ oloko, na ụgbọala. Mgbe ọ na-abịa na-ewere a njem nke Italy, Otú ọ dị – enwere ụfọdụ ego iji gafere…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Ejegharị Europe ụgbọ okporo ígwè bụ otu n'ime ndị kasị mara mma, sinik, na njem ọdịnala n'ụwa. Ma ị na-achọ kpọmkwem ụgbọ oloko n'agbata isi European obodo ndị dị ka ndị ọhụrụ na London na Amsterdam ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ na ị na-achọ ihunanya ụgbọ okporo ígwè njem, European ụgbọ okporo…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Gịnị ga-akpali gị na-a ụgbọ okporo ígwè na njem karịa ekiri na-akpali akpali Movies Featuring insgbọ oloko? Were a anya anyị ndepụta nke kacha mma Movies Featuring Ụgbọ oloko, and tweet us at @saveatrain and tell us which ones you have seen and if you loved them…